स्थानीय चुनाव कमल रिमाल
विराटनगर महानगरपालिकाको मतगणना नसकिंदै गठबन्धनबाट उपमेयरका उम्मेदवार अमरेन्द्र यादव पराजित भएका छन्।
उर्लाबारीमा एमाले विजयी
मोरङको उर्लाबारी नगरपालिकामा नेकपा (एमाले) विजयी भएको छ। मेयरमा गंगाप्रसाद खरेल र उपमेयरमा मीनाकुमारी खतिवडा विजयी भएका हुन्।
मोरङमा तीन पालिकाको गणना सकियो; दुईमा एमाले, एकमा कांग्रेस विजयी
मोरङका १७ वटा स्थानीय तहमध्ये तीन वटाको मतगणना सम्पन्न भएको छ। तीमध्ये दुई स्थानीय तहमा नेकपा (एमाले) र एउटामा नेपाली कांग्रेस विजयी भएका छन्।
विराटनगरमा कांग्रेसलाई गुटको, एमालेलाई फुटको डर कांग्रेस र एमाले हाराहारीमा रहेको विराटनगर महानगरमा दुवै पार्टीलाई विपक्षीभन्दा पनि आन्तरिक कलहकै डर छ।
विराटनगरमा गठबन्धनभित्रै प्रतिस्पर्धा, डिला संग्रौला सहित १३ दाबेदार विराटनगर महानगरपालिको मेयरका लागि सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।
बीउ नछर्दै धानको मूल्य निर्धारण बीउ छर्ने समय नहुँदै पूर्वी नेपालका केही जिल्लामा किसानको सहजताका लागि धानको मूल्य तोकिएको छ।
प्रहरीको मृत्युपछि लेटाङमा कर्फ्यू विद्यार्थीले कोठामा थुनेका शिक्षकलाई सुरक्षित निकाल्ने क्रममा भएको झडपमा एक प्रहरी जवानको ज्यान गएपछि मोरङको लेटाङ नगरपालिकामा कर्फ्यू लगाइएको छ।
राजा विराटको प्राचीन दरबारको उत्खनन शुरू पुरातत्त्व विभागले महाभारतमा उल्लेख भएको राजा विराटको दरबारको ऐतिहासिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व पत्ता लगाउन उत्खनन शुरू गरेको छ।
१५ करोड हिनामिनामा सप्तकोशी ब्यांकका सीईओ सहित चार कर्मचारी पक्राउ धनकुटामा प्रधान कार्यालय रहेको सप्तकोशी विकास ब्यांकमा १५ करोडभन्दा बढी हिनामिना भएपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नवीन सुवेदी सहित चार कर्मचारी पक्राउ परेका छन्।
एमाले छाडेका नेतालाई जमानत जोगाउन ओलीको चुनौती नेकपा (एमाले) छाडेर गएका नेताहरूलाई आगामी चुनावमा जमानत जोगाउन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनौती दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री राईले दोहोर्‍याए शेरधन सरकारकै अर्थमन्त्री प्रदेश १ का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्।
को हुन् नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई? २०७४ मा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनेर प्रचारमा जाँदा राजेन्द्र राईले कार्यकर्तालाई भनेका थिए, यो पटक होइन, अर्को पटक मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गर्छु। तर, राजनीतिक फेरबदलका कारण उनी यसै पटक प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
दुई महीनामै सरकारबाट बाहिरिए आचार्य प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले सोमबार पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ।
समाचार कमल रिमाल
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले ७ कात्तिकमा विश्वासको मत लिने भएका छन्।
सुरक्षा गार्डलाई गोली हानेर सिटिजन ब्याङ्क लुटपाट, पेस्तोल सहित तीन पक्राउ
मोरङको धनपालथान गाउँपालिका–४ कर्सिया बजारमा रहेको सिटिजन ब्याङ्कको शाखामा मङ्गलबार अपराह्न लुटपाट भएको छ। लुटपाटमा संलग्न रहेको आरोपमा तीन जना पक्राउ परेका छन्।
प्रदेश–१ का १० सांसदले रोजे एकीकृत समाजवादी, मुख्यमन्त्री अल्पमतमा नेकपा (एमाले) प्रदेश–१ का १० जना सांसदले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) रोजेका छन्।
किन घट्यो प्रदेश-१ को बजेटको आकार? प्रदेश–१ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले मंगलबार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि रू.३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको अनुमानित आयव्यय प्रस्तुत गरे। चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेट रू. ८ अर्ब ४३ करोडले कम हो।
कोरोना संक्रमण बढेपछि मोरङमा बन्दाबन्दी कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङले बन्दाबन्दीको घोषणा गरेको छ।
कोशीटप्पुमा ‘ब्याक क्रस’ थपिँदा अर्नाको वृद्धि न्यून कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा घरपालुवा भैंसी छोड्ने गरेकाले ‘ब्याक क्रस’को संख्या अत्यधिक बढ्दा अर्नाको वृद्धि भने न्यून पाइएको छ।
संसद् पुनःस्थापना भए देश अस्थिरतामा जान्छ : ओली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् पुनःस्थापना भए देश अस्थिरतामा जाने बताएका छन्।
प्रदेश १ को राजधानीमा सडक अतिक्रमणले पैदलयात्रीलाई सास्ती प्रदेश १ को राजधानी विराटनगर प्रवेश गर्ने कोशी राजमार्गमा भएको अतिक्रमणका कारण पैदलयात्री सडकबाटै हिँड्न बाध्य छन्।
उद्योग मन्त्रालयद्वारा विराटनगर जुट मिल्सको अनुगमन नेपालको पहिलो र सरकारी स्वामित्वमा रहेको उद्योग विराटनगर जुट मिल्स संचालनमा ल्याउन सकिने/नसकिनेबारे उद्योग मन्त्रालयले अनुगमन गरेको छ।
कोशी टप्पुमा चरा गनिँदै ‘चराको राजधानी’ कोशी टप्पुमा जलचरा गणना थालिएको छ। हरेक वर्ष पुस महीनामा ५ दिन लगाएर गरिने चरा गणना यस वर्ष ३३औं पटक हो।
शिक्षकको गोली हानी हत्या मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका १ वर्खेमा मंगलबार बिहान स्थानीय एक शिक्षकलाई अपरिचित समूहले गोली हानी हत्या गरेको छ।